Baolina kitra – « CAF champions league» :: Mafimafy ny miandry ny Fosa Juniors any Maorisy • AoRaha
Baolina kitra – « CAF champions league» Mafimafy ny miandry ny Fosa Juniors any Maorisy
Henjankenjana ny lalao. Sarotsarotra ny miandry ny Fosa Juniors Elite, solontena malagasy, amin’ny lalao miverina ho an’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika eo amin’ny isan-tarika (CAF Champions League), raha afaka tapa-bolana, manoloana ny Pamplemousse SC, avy any Maorisy.
Ady sahala, samy tsy mitoko, farafaharatsiny, no ilain’izy ireo hiakarana amin’ny dingana manaraka. Raha tsy izay dia mila mampidi-baolina any an-tanin’olona mba hiarovana ny tombon’isa 1 noho 0 azo tany Mahajanga, tamin’ny sabotsy lasa teo, ny tompondakan’i Madagasikara 2019. “Hanitsy izay tsy nety izahay. Ny fisian’ireo mpilalao roa naratra (Elefoni sy Fabrice) no nanova tanteraka ny lalaonay tamin’ny lalao mandroso”, hoy Rasoanaivo Titi, mpanazatra ny Fosa Juniors Elite, avy any Boeny.
Mbola tsy fantatra, hatramin’ny fiafaran’ny lalao mandroso, ny kianja hanaovana ny lalao miverina, any Maorisy. Kianja telo no hahafahana mandray lalao iraisam-pirenena ho an’ny taranja baolina kitra any amin’ity nosy rahavavy ity, dia ny kianjan’i Georges V, any Curepipe, ny kianjan’i Auguste Vollaire, any Flacq ary ny kianjan’ny Anjalay, any Pamplemousse. Ity farany no tokony handray izany saingy raha hitady fandresena ny maorisiana dia any amin’ny kianja natao hamonoana ny mpifanandrina aminy, “Abbatoir” na abatoara araka ny filazan’ny maorisiana azy ny any Curepipe, no hanaovana ny lalao. Ankoatra ny klioba mpifanandrina dia tsy maintsy misedra hatsiaka sy ranon’orana ary ny fahasiahan’ny mpijery ireo mpivahiny any amin’ity kianja ity. Matetika dia resy hatrany ireo mpifanandrina amin’i Maorisy ao amin’io kianja io. Isan’ireo efa nisedra izany ry Marobe Jean Claude na i Lôlôdy, tamin’ny Lalaon’ny Nosy farany teo, nanoloana ny Club M Maorisy.
Tombony ho an’ny Maorisiana ihany koa ny filalaovana any amin’ny kianjan’i Auguste Vollaire, any Flacq. Ankoatra ny maha kely ny kianja dia mifanakaiky ny toeran’ny mpilalao mpisolo toerana sy ny mpijery.
Tsipy kanetibe :: Hampifaninana tanora maimaim- poana ny PAC Ampitatafika